Golf any Puerto Rico: tsenan'ny fizahantany Niche
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Golf any Puerto Rico: tsenan'ny fizahantany Niche
Fantaro i Puerto Rico, An'i Puerto Rico Destination Marketing Organisation (DMO) voalohany indrindra, dia nanambara fa ny golf golf sy ny resort golf dia mitatitra fitomboana betsaka amin'ny vola miditra sy vola miditra mandritra ny efa-bolana voalohany amin'ny taona 2019 (raha oharina amin'ny fe-potoana tamin'ny taon-dasa), fironana iray mampiseho ny fiakaran'ny fizahan-tany eto amin'ny Nosy.
Ny klioban'ny firenena Wyndham Grand Rio Mar Golf & Beach Resort - izay misy taranja roa tantanan'ny Troon - dia nitatitra ny fitomboan'ny vola miditra 128% ny volana Janoary-Mey, ary nitombo 56% ny fihodinana.
TPC Dorado Beach talen'ny golf Jeff Willenberg mamaritra ny zava-bitan'ny kliobany ho miavaka. "Ny mpikambana ao amin'ny klioba dia nitombo tamin'ny hafainganam-pandeha tsy nampoizina tamin'ity taona ity, ary tena tsara ny fihodinan'ny golf," hoy i Willenberg, izay manara-maso ny hetsika golf 36-hole miaraka amin'ny maha-mpikambana sy kilalao ampahibemaso.
Ireo fiakarana dia mifanaraka amin'ny statistikan'ny fizahantany Discover Puerto Rico. Anisan'izany ny volana Janoary - Aprily 2019 fanatrarana ny fandaniambola $ 373.6 tapitrisa, ny avo indrindra tao anatin'ny valo taona lasa, ary ny fiakarana 12.4 isan-jato. Ny fitomboan'ny fandaniam-bolan'ny nosy haingana dia atosiky ny fiakaran'ny vidin'ny trano fanofana fialan-tsasatra, 23 isan-jaton'ny fitsambikinana niavaka. Manamafy izany ny fahatongavan'ireo mpandeha matanjaka (ny isan'izy ireo dia mpizahatany izay manao golf), mahatratra 1.5 tapitrisa ho an'ny fe-potoana janoary - aprily.
Misy taranja golf 17 idirana ho an'ny daholobe Puerto Rico, isa manan-danja amin'ny haben'ny karazan'ilay Nosy. Manomboka amin'ny trano fandraisam-bahiny mihaja ka hatrany amin'ny munisipaly izy ireo, miparitaka manerana ny lafiny efatra amin'ny Nosy - maromaro mivondrona eo akaikin'ny manan-tantara San Juan - ary koa miorina anaty. Ny fahitana an-dranomasina, ny hazo rofia manerana izao tontolo izao, ary ny vista an-tendrombohitra sy ny ala dia mamaritra ny toerana misy azy ireo. Ny isa amin'ny vidiny, ny tany, ny fomba fanao ary ny fampitaovana mifandraika amin'izany dia samy hafa sy mifameno.
Ny maherifon'ny mpiasa ao amin'ny United Airlines taorian'ny fampitahorana mpitifitra tamina seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena tao Honolulu